Baarlamaanka Puntland oo diyaarinaya mooshin ka dhan ah golaha wasiiradda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo diyaarinaya mooshin ka dhan ah golaha wasiiradda
Baarlamaanka Puntland [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa diyaarinaya mooshin ay ku doonayaan in ay ku ceyriyaan golaha wasiiradda Puntland, sida ay sheegeen ilo-wareedyo.
Ilo-wareed katirsan dowladda oo magaciisa qariyay ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in xildhibaano ka badan 40 ay saxiixeen mooshinka ka dhanka ah golaha wasiiradda iyaga oo ku eedeeyay shaqo xumo.
Waxaa ka socda gudaha Garoowe kulamo ay albaabadu u xiranyihiin oo u dhaxeeya dowladda iyo xildhibaanada kuwaasoo dabada ka riixaya mooshinka, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
Tilaabadaan ayaa imaanaysa iyada oo dowladda isku diyaarinayso sanadguurada 19-aad ee Puntland, taasoo dhacda 1-da Agoosto sanad walba.
London-(Puntland Mirror) Turkey will open its military base in Somalia in September this year. Speaking on Thursday at a Somalia conference held in London Turkish Prime Minister Binali Yildrim said that a military base in [...]